गाँउ निन्द्रामा रहेका बेला रासा`यनिक ग्यास लिक, बिहान सकड`मै ढ`ल्न` थाले मानिस – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/गाँउ निन्द्रामा रहेका बेला रासा`यनिक ग्यास लिक, बिहान सकड`मै ढ`ल्न` थाले मानिस
गाँउ निन्द्रामा रहेका बेला रासा`यनिक ग्यास लिक, बिहान सकड`मै ढ`ल्न` थाले मानिस
नयाँ दिल्ली । भारतमा रासायनिक ग्यास चुुहा`वट हुँदा कम्तिमा ९ जनाको मृ`त्यु भएको छ। आन्ध्र प्रदेशको विशाखापटनममा एल.जी. पोलिमर प्ला`न्टमा बिहीबार रासायनिक ग्यास चुहा`वट हुँदा ९ जनाको ज्या`न गएको हो। क`म्तिमा ३ सय जना मानिसलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। प्रहरीले सयौं व्यक्तिलाई नजिकको क्षेत्रबाट हटाएको छ। बिहीबार बिहान प्लान्ट बाट स्टेरिन ग्यास चुहिँ`दा आसपासका गाउँका मानिसहरू निदाइरहेका थिए।
ग्यास चुहवाट भएको क्षेत्रबाट कम्तिमा १५ सय जनाको उद्धार गरिए`को छ। अधि`कारीहरुका अनुसार प्लान्ट नजिकको करिब तीन किलो`मिटर क्षेत्रमा धेरै जोखिम छ। प्र`हरीले ३ जनाको प्लान्ट नजिकै मृ“त्यु भएको र अन्यको उपचारको क्रममा निध`न भएको जनाएको छ। प्लान्ट व्यव`स्थापन विरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको छ। प्रहरीले ५ गाँउ खाली गरेर अन्य इला`कामा सारेको छ। धेरै`लाई आखा पोल्ने` र सास लिन समस्या भएको छ। खासगरि बृद्ध र बाल`बालिकाहरुमा यसको बढि असर देखिएको छ। घट`ना`पछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक ट्विट गर्दै घटनालाई नियाँ` लिरहेको बता`एका छन्।
र सबैको स्वास्थ्यलाभको लागि प्रार्थना गरेका छन्। उक्त केमिकल प्लान्ट एजली पोलि`मर्स इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडको रहेको बताइएको छ। सन् १९६१ मा बनाइएको प्लान्ट हिन्दुस्तान पोलिमर्स को हो। जसलाई सन् १९९७ मा दक्षिण कोरियाली कम्पनी एलजी अधिग्रहण गरेको थियो। आन्ध्र प्रदेका उद्योगमन्त्री गौतम रेड्डीले यो घटना बिहान साढे ३ बजे मानिसहरु सुतिरहेको बेला भएको बताए। उनले भने, ”`फ्याक्ट्रि लकडाउनका बी`च खोल्ने तयारी थियो, का`मदारले फ्याक्ट्रि खोल्ने त`यारी गरेपछि यस्तो दुर्घट`ना भयो। त्यहाँ के के भयो हामी बु`झ्ने कोसिस गरिरहेका छौं।
विशाखापटनम में जहरीली गैस लीक होने से आठ लोगों की मौत#Vishakhapatanam #VizagGasLeak #AndhraPradesh pic.twitter.com/HBiWR1fRke
कम्पनीको व्यव`स्थापनले नियमको उलं`घन गरेको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ।” अधिकारीहरुले घ`टना निय`न्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएका छन्। घटनास्थलमा ५० भन्दा बढि एम्बुलेन्स तथा उद्धारका सवारि तैथान गरिएको छ। रासायनिक ग्यासका कारण गाँउका थुप्रै जनावरहरु म“रे`को भारतीय स`ञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा सन् १९८४ मा मध्य-प्रदेशको भोपालमा पनि यस्तै औद्यो`गिक ग्यास चुहिएर ठूलो सं`ख्यामा मानिसहरुको मृ`त्यु हुनुका साथै कैयौं व्यक्तिहरु सख्त घा`इते भएका थिए ।
कोरोनाले गर्दा अन्तिम सास लिँदै गरेकी आमालाई, अस्पताल को झ्यालमा चढेर छोराले विदाइ गरे
कोरोना भाइरसपछि चीनको हातमा गइरहेको छ विश्वको नेतृत्व ?
कोरोना बढेपछि फेरि ४५ दिन सम्म लकडाउन थपियो !! पुरा पढ्नुहोला